Nisy lehilahy iray izay karohina ary efa fantatra fa tompon’antoka tamin’io vono olona io. Nolerany antsy efa ho 10 sm teo amin’ny tendany ilay mpiambina. Ny vehivavy iray izay voalaza fa sakaizan’io maty io koa dia nosamborina teo ihany. Nentina teny amin’ny hopitaly Loterana eny Ambohibao ny naratra saingy tsy tana intsony ny ainy.
BAUME RELAX SANDOKA
Niparitaka tao amin’ny tsenan’Anosibe ny menaka mafana « baume relax » sandoka. Rehefa naharay fitoriana ny polisy misahana ny fampiasana hosoka dia nidina an-tsehatra teny an-toerana. Rehefa nojerena tokoa dia feno mpivarotra azy tao an-tsena. Miisa 983 ireo boaty nogiazana ary olona efatra no nosamborina avy hatrany. Ireo mpivarotra ihany aloha hatreto no nosamborina satria tsy hita ny tena atidoha nikotrika.
NAHOMBY NY PAIKADIN’NY POLISY
Mahomby hatrany ny fanaon’ireo polisy tsy manao fanamiana. Tena tsy araky ny mpanendaka mihitsy ary betsaka ireo olon-dratsy sarona eny amin’ny toerana fiantsonan’ny bus, indrindra eny amin’ny faritr’i 67ha izay efa mampikaikaika ny olon-tsotra sy ny mpandeha fiara tratra ao anaty fitohanan’ny fifamoivoizana. Toa io indray aza no mahomby kokoa noho ny « péloton mobile » izay mandehandeha fotsiny nefa tsy miditra elakela-trano akory.
VOLA SANDOKA 20 000 ARIARY
Miparitaka ny vola sandoka amin’ny raviny 20.000 ariary ao Toamasina. Efa mailo ny mpivarotra ka raha vao hafahafa ny ravim-bola dia miantso avy hatrany ny polisy izy ireo. Ny tsikaritra dia tsy fantatr’ireo voasambotra akory ny atidoha mikotrika ao ambadika. Efa malaza ratsy amin’ny fanaparitahana vola sandoka any Atsinanana ary raha ny fantatra dia nisy fanadiovam-bola tany aloha tany izay mandeha ao amin’io faritra io ankehitriny.
ZAZAVAVY TERAKA KAMBANA 3
Zazavavy 15 taona no nanao kamban-telo tao Ankilimalinike, ao Toliara 2. Nanaitra ny maro izany satria tena mbola kely ilay olona ary tsy mbola tokony ho fotoanan’ny miteraka. Nandeha renin-jaza izy ary rehefa tsy voafehy tao ny fahasalamany izay vao nanatona hopitaly. Teo no nahoraka amin’izay ny zava-nitranga ary mba avotra ihany anefa ilay zazavavy. Mbola endrika fanararaotana ara-nofo ihany ny fisian’ny zaza miteraka toy izao.